"Daddy! There'saparking spot!" ကြည့်- သမီးလေးရဲ့ အသံကြားလိုက်မှဘဲ မိုင်လေးဆယ်လောက် ဆန်ဖရန်စစ္စကို ပန်းချီကားချပ်ထဲ မောင်းနှင်ရင်း ဘုရားဖန်ဆင်းခြင်း အလှတရားကို ခံစားလာလိုက်တာ၊ ကားနောက်ခုံမှာ ချစ်ဇနီးနဲ့ သားသမီး လေးဦး ပါလာတာကို ဘုရားကျောင်းရောက်မှဘဲ သတိရမိတော့သည်။ ဘယ်လောက် ပီတိဖြစ်စရာ ကောင်း တဲ့ အသင်းတော်လဲဆိုတာ၊ ဒါကိုဘဲ ကြည့်တော့။ "Thanks, honey!" သမီးလေးညွှန်ပြတဲ့ နေရာမှာ ကားရပ်ခဲ့ပြီး ဧည့်သည်ဆရာကို ခေါ်ကာ ကျေးဇူး တော် ချီးမွမ်းခြင်း အနှစ်သာရ အသစ်နဲ့ ဘုရားကျောင်းထဲ ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတော့သည်။ ဪ ပန်းချီကားချပ်ထဲသို့ ခရီးနှင်ရတဲ့ ပီတိဟာ ဘာနဲ့မှ နှိုင်းလို့မရနိုင်တဲ့ အဓိပ္ပါယ်ရှိလှတဲ့ ခရီးသစ် ပါတကား။